हामी संगै मेरै आफ्नै घरमा एकै छतमा रात कटाउन बाध्य भयौ - Lucky xman blog
written by ::Milan Abrial
.उसको त्यो पीडा सुन्दा लाग्दैथियो मेरो आफ्नै कहानी भनिरहेकी छे । मलाई निकै भावुक बनायो सुत्न खोजे सुत्नै सकिन । साथमा रहेको डायरी निकालेर लेख्न लागे ।
तपाईलाई न राम्रोसंग चिनेको थिए न जानेको ,तपाईं जत्ती म प्रती उत्सुक हुनुहुन्छ नि म पनि त्यही नै उत्सुक छु ।।
तपाईको लेखहरु पत्र पत्रीका नदेखेको हैन तर तपाईको कथा जब मैले रेडियोमा सुने । जब तपाईको त्यो शब्दहरुले लेखहरुले मलाई खै तपाईं तिर तान्यो । चुम्बकीय चिज झै आकर्षण गर्यो ।
तपाईको लेख, कथा पढन,सुन्न पाउँदा ज्यादै भावुक महिमित हुन्थे अनि यस्तो लेख्ने आखिर को होला भन्ने प्रस्नहरु मनमा उब्जिरहन्थियो सधा । अनि तपाईले एक पटकको कथा रेडियोमा दिनु भएक्क रहेछ ?? त्यहा अन्तिममा सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनका लागि तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको नाम दिनु भएको रहेछ ।
त्यसै बाट एड गरे । तपाईं त मैले सोचेको भन्दा ज्यादै राम्रो राम्रो शब्दहरु लेख्नु हुदो रहेछ । तर बिडम्बना तपाईको अनुहार देख्न पाईन किनकी तपाईले आफ्नो अनुहार देखाउनु भएको रहेनछ ।
त्यसैले तपाइँलाई मैले तपाईं आउनु हुन्छ या आउनु हुन्न भनेर भेट्न चाहान्छु भनेर म्यासेज गरे तर तपाईले स्विकार्दै यहासम्म आईपुग्नु भयो ।
कहानी हरेकमा हुन्छ सायद मेरो तेस्तो कुनै तपाईलाई मन छुने कहानी त थिएन तर बस् तपाईलाई एक पटक देख्न अनि भेट्न चाहान्थे । तपाईको ठेगाना तपाईको साथिलाई मैले सोधेर पत्ता लगाएको थिए । त्यसैले यहाँ बोलाए ।
“सानै कहानी भए पनि सुनाएर मलाई प्रफुल्ल बनाउन चाहेकि हुदि हो उ बोल्न थाली बिस्तारै । ।”
उ बोल्दै थि म उसको अनुहारमा आश्चर्य मानेर हेरिरहेको थिए अनि सुरु गर्न लागि आफ्नो केही लुकेका कहानी ।
सानै कहानी भए पनि सुनाएर मलाई प्रफुल्ल बनाउन चाहेकि हुदि हो उ बोल्न थाली बिस्तारै ।
** जब मेरो जन्मस्थान
ताप्लेजुङको फुङलिङमा भयो बाबा शिक्षक अनि ममि पनि शिक्षक भएका कारण बाल्यकाल अनि पढाइ सानै देखि राम्रै हुँदै गयो त्यही फुङ्लिङबाट एस .एल .सि . हासिल गरे ।।
उच्च शिक्षाका लागि मलाई त्यहा खासै राम्रो बिद्यालय नभएका कारण बिर्तामोडमा कोठा लिएर राखियो । केही महिना पश्चात् यतै घर लिएर बस्न थालियो । बाबा साईन्न्सको ठुलै शिक्षक हुनु भएका कारण उहालाई खोटाङमा सरुवा गरियो ।
ताप्लेजुङमै भयो मामुको तर छुट्टी मिल्दा मलाई भेट्न आईरहनु हुन्थियो ।
घरमा काम गर्ने राखिदिनु पनि नभएको हैन तर म आफै पनि सक्ने घर समाल्न सक्ने भएको थिए त्यसैले एक्लै बस्न थाले ।
कलेजमा पढाई निरन्तरनै थियो ११ को परिक्षा नजिकिन्दै नै थियो ।
परिक्षाको पहिलो दिन थियो म ढिला होला भनेर चाडैनै गएको थिए नभन्दै केही मिनेट ढिला भएको रहेछ ।
(बिस्तारमा लेख्दा लामो हुने भएका कारण सारासं लेखिएको छ )
म बेन्चमा बसेको मात्रै के थिए मेरो नजिकै आएर एक नव युवक बस्यो कलेज त आफ्नै थियो अनि कलेज देखि बाहेक कोहि आएका थिएनन ।
पक्कै कलेजकै हो तर कसरी आज मात्रै “सायद एड्मिसन गरेर परिक्षा मात्रै दिन आएको हुदो हो “””
नजिकै भएका कारण ५/६ दिनसम्म लेख्ने क्रममै चिनाजान भयो साटासाट भयो लेखिएका कापीहरु तर थाहा थिएन कपि संगै मन पनि साटासाट भए भनेर ।
उ यहि नजिकै मेरै नजिकै को रहेछ अफिसमा बिजि हुने भएका कारण आउन नपाएर एकै पटक परिक्षामा सम्लग्नता जनाएको रहेछ ।
हो, म हर रात टिल्ल हुनेगरी पिउने गर्छु बाँकि रहेको जिन्दगी छिटो छिटो जिउने गर्छु
परिचय भयो म अनि उसमा नाम – बिनोद रहेछ । मान्छे राम्रै नै थियो हरेक समय केयर गरिरहन्थियो मेरो ।
यसरिनै परिक्षा सकियो उ अनि म बिच मित्रता गासियो ।। नम्बर फेसबुक आईडी साटियो नजिकियौ बिस्तारै बिस्तारै फोन अनि म्यासेजमा बोल्ने बानी हैन आदत लाग्यो हामिमा ।।
एक दिन उसले प्रपोज गर्यो मैले केही दिन सोचेर जवाफ दिने अनुमती लिए ।।
उसले स्वीकार गर्यो । धेरै सोचे उ निकै मेहेनती अनि लगनशील थियो उमेर पनि २४/२५ को थियो । मान्छे पनि सहि नै थियो हरेक दुख सुखमा साथ दिने गर्न थालेको थियो ।।
उ नजिकै थियो मेरो तर कहाँ उसको परिवार केही थाहा थिएन । सोध्न पनि चाहिन बिश्वास गरे आँखा चिम्लेर अनि उसको त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरिदिए ।।
यसरिनै झाङिन्दै गयो बिस्तारै केही महिना हाम्रो प्रेम । एक दिन उसले प्रस्ताव गर्यो । कतै बाहिर घुम्न जाने मैले उसको वचनलाई नकार्न सकिन । यसरिनै हामी समय मिल्दा बाहिर जान थाल्यौं घुम्न अनि एक अर्काको प्रेममा हराउन ।।
एक दिन घुम्न गएर आउदा रात पर्यो । हामी संगै मेरै आफ्नै घरमा एकै छतमा रात कटाउन बाध्य भयौ त्यहा हामी बिचमा केयर सेयर सबै भए सबै बन्धन तोडिए एकअर्कामा जोडियौ हामी ।।
यसरिनै हामी बिच शरीर मन साटासाट हुन लाग्यो यो प्रक्रिया करिब १/२ महिना चल्यो ।।
तर बिडम्बना मलाई केही दिन पछि थाहा भयो उ बिवाहित रहेछ ।। सबै सपना चकनाचुर भए सोचेको सबै सपना सिर्फ सपनामै सिमित भए ।। उ यस्तो होला भनेर कल्पनासम्म नगरेको कुरा भयो ।। उसको त सानो नानिसम्म रहेछ बस् मलाइ त प्रयोग मात्रै गरेको रहेछ धेरै कमजोर भए म ।।
जिन्दगीबाट अलगिन खोजे तर सकिन । उ सम्पर्क बिहिन भयो बिस्तारै ।।आफैले उसलाई चिन्न नसकेकोमा आफैलाई धिकारे दोष उसको हैन दोष मेरो थियो किनकी छोटो समयमै उसलाई आफ्नो सम्झिए आफ्नो तन मन उसैलाई सुम्पिए उसैलाई सर्वास ठानी ।
Click here for more stories from me!
तर उ बिवाहित हो भनेर एक छल्कोसम्म पर्न दिएन म मा ।।
त्यसैले मेरो पढाईमा पनि बाधा आउन लाग्यो पढाइ खासा राम्रो भएन मानसिक चिन्तामा निकै नै गुज्रिए म ।
मैले उसलाई बारम्बार फोन गरे तर उसको फोन फेसबुक एकाउन्टबाट मलाई अलग्याई सकेको थियो रहरले हैन बाध्यताले अलगिए म ।
कोहि थिएन उ बाहेक मेरो आफ्नो भन्नू परिवार सबै टाढा भए पछि एक्लो भए बस् मौन रहेर आँसु बगाउनु सिवाय अरु केही रहेन ।
बस् छोट्करिमा आफ्नो डायरिमा यत्ती कैद गर्न पाए ।
मनमा आफैलाई उब्जिरहयो एक प्रस्न आखिर प्रेम के हो ?? कसरी बुझौ प्रेम के हो कहाँ कसरि हुन्छ आजसम्म कुनै विद्वान् ले सम्म पत्त्ता लगाउन नसकेको आखिर प्रेम के हो ।।
प्रेमको नाम लिएर नजिकिने अनि प्रेमको बहाना लिएर तन लुट्नेहरु देखि घृणा जागेर आयो ।।
हरेक समय म आफ्नै मनलाई प्रश्न गर्छु आखिर के हो प्रेम ???
लेख्न खोजेको त थिइन यो भाग तर धेरै जनाले अनुसाको कहानी भनेर माग भएका कारण लेख्न बाध्य भए ।
माया पाउनु मात्रै हैन,गुमाउनु पनि माया नै हो,जो कोइले पनि गुमाउन सक्छ तररोएर होइन हासेर बिदा गर्नुस,एक दिन त्यस्को फल पाउनु हुनेछ।
PrevPreviousसबै सुरु देखि अन्तिमसम्म मलाई वृतान्त सुनाई -अन्योल -1(मिलन अविरल)
Nextपुजा गर्दा हातमा समाएको थाली राम्रो लुकेर नजर लाउँनी दाईको साली राम्रो (ओम परियार)Next
(के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव यसरी नै सधै दिनुहोला साथ अनि सहयोग सधै चाहान्छु । म बाट आगामी दिनमा के कस्तो लेख चाहानुहुन्छ मनमा लागेका कुरा मलाई खुलेर निर्धक्क भएर इन्बक्समा आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ ।)